ट्रमा सेन्टरमा इन्भेष्टमेन्टको एक्सटेन्सन काउन्टर - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
भारत : ४२४ मेगावाट
ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
माग : ११८८ मेगावाट
ट्रमा सेन्टरमा इन्भेष्टमेन्टको एक्सटेन्सन काउन्टर
पुष १६, २०७४ 862 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले काठमाडौं महानगरपालिकाको माहांकालस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा एक्सटेन्सन काउन्टर खोलेको छ । ३६५ दिन २४ सै घन्टा सेवा सञ्चालन हुने गरी काउन्टर खोलेको हो ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत ट्रमा सेन्टर परिसरको काउन्टरले आर्थिक कारोबार गर्न सहयोग गर्ने बैंकले जनाएको छ । काउन्टरले त्यहाँ आउने विरामीको उपचारक्रममा टिकट काट्नेदेखि बिल भुक्तानीमा पनि सहयोग गर्नेछ ।
बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत देशका विभिन्न कला तथा संस्कृति एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउदै आएको छ ।
साथै बैंकले निकट भविष्यमै ट्रमा सेन्टर परिसरमै आफनो ९८औं एटिएम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रवेशद्वारमा रहने एटिएमबाट अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीका साथै सर्वसाधारणले पनि सेवा लिन सक्नेछन ।
आठ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको बैंकको हाल ६३ शाखा (नारायणगढ र पर्सा शाखा स्थानान्तरणको प्रक्रियासहित) तथा ९७ एटिएम पुगेको छ । ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी भिसा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता रहेको ५४ शाखारहित बैंकिङ सुविधाका साथै ३ सय बढी भिसा तथा एनपिएन सदस्य बैंकका एटिएम छन् ।
चुक्ता पुँजी १०.६३ अर्ब रहेको बैंकको हाल निक्षेप १३१ अर्ब तथा कूल कर्जा लगानी १०७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले ‘दि बैंकर’, फाइनान्सियल टाइम्स, लन्डनद्वारा दिइएको सम्मानजनक ‘बैंक अफ दि इयर’ उपाधि ५ पटक प्राप्त गरिसकेको छ । यस्तै, इक्रा नेपालबाट ‘क’ वर्गको रेटिङ पनि ५ वर्षदेखि लगातार हासिल गर्दै आएको छ ।
गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चीनसँग ‘एमओयू’
हिमाल हाइड्रोको ४ महिने हडतालले तल्लो हेवाको उत्पादन अवधि धकेलियो
प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा स्पष्टिकरण दिए– पश्चिम सेती खारेज भएको छैन, चीनले नै पाउँछ
४ निजी आयोजनामा चिनियाँ लगानी, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा समझदारी भयो
अब आवेदन दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स
प्राधिकरण ज्यालादारी कर्मचारीका तत्कालीन माग असारभित्रै पूरा हुने
वर्षा र हावाहुरीले ४ हजार बढी विद्युतीय पोलमा क्षति
बिजुली चोर्ने ३ वडाध्यक्ष पक्राउ, ५६ हजार जरिवाना तिरे
विद्युत प्राधिकरणले आरओआर आयोजनाको पिपिए नगर्ने
बुटवल पावर कम्पनीले १४ सय मेगावाटका आयोजना अघि बढाउँदै
रेल एक सपना
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार
लेखा अधिकृत :